Güell Obí - Otu n'ime ụlọ ihe atụ kacha Gaudí | Njem zuru oke
El Ülọ Güell Ọ bụ ụlọ nke nnukwu onye nrụpụta ụlọ bụ Antonio Gaudí mere ya. Ọ dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, n'okporo ámá Nou de la Rambla, na Barcelona. Ekwuru na Gaudí tinyere ihe niile kacha mma nke onwe ya n'ọrụ a yana n'ezie ọ mezuru ihe ọ tụrụ anya ya ebe ọ ka bụ otu n'ime ndị isi.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ọrụ kachasị mkpa ọ rụtụrụla. Ya mere, Güell Obí nwere echiche na-enweghị ngwụcha na-agagharị n'isi ụlọ ahụ, ruo mgbe e kpebiri ya. Ngwurugwu, taịl ma ọ bụ dome bụ ụfọdụ n'ime ihe na nkọwa ndị anyị ga-ahụ ọrụ a pụrụ iche na anyị ga-eleta taa.
1 Akụkọ banyere Palacelọ Güell
2 A gara n'obí
3 Na facade nke Güell Obí
4 Mgbe ị gara Obí na price
Akụkọ banyere Palacelọ Güell
Ekwesiri icheta na Güell Obí E wuru ya n’aha Eusebi Güell. Nke a bụ otu n’ime ndị kacha mkpa n’oge ya. E wezụga ịbụ onye ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ onye edemede, ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na 1878 ọ hụrụ onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Gaudí. O juru ya anya ngwa ngwa banyere ọrụ ha niile site na mgbe ahụ gawa ọbụbụenyi dị n'etiti ha ga-amalite. Kpamkpam, Güell nwere ụlọ nke nna ya, na mpaghara 'La Rambla de los Capuchinos'. Na mgbakwunye, ọ na-azụ ụlọ ọzọ n'ebumnuche nke ịga n'ihu na-agbasawanye ngalaba ya n'otu mpaghara ahụ.
Si ebe a wee echiche nke ike jikọọ ụlọ na Rambla. A ga-eme nke a site na mpaghara patio dị n'ime. Yabụ, ọ gwara enyi ya bụ Gaudí banyere ọrụ a ma n'oge na-adịghị anya ha malitere site na akwụkwọ niile iji nwee ike ịrụ ya. Startbọchị mmalite ya dị na 1886 ma a gaghị agwụ ya ruo 1890. O doro anya na nsonaazụ ya bụụrụ Güell nnukwu mpako. N'ezie, o biri na ya nwa oge, wee gafere nye nwanyị di ya nwụrụ na n'ikpeazụ nye ụmụ ya nwanyị. Ọ bụ eziokwu na emesịa otu nde mmadụ chọrọ ịzụta ya were ya 'jiri okwute', mana ndị otu mpaghara Barcelona bụ onye mechara nweta ya.
A gara n'obí
O doro anya nleta na Güell Obí ọ bụ otu n’ime ihe ịtụnanya. Maka na o nwere otutu nkuku kwesiri ileta. O nwere mpaghara okpuru ulo, nke ezubere maka ụlọ ebe ahụ. Mgbe ahụ, n’elu ala anyị na-ahụ ụlọ nzukọ, onye na-eburu ya ụzọ na ebe ndọba ụgbọala. N'ebe mezzanine bụ mpaghara nhazi. Ala nke mbụ ga-abụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ebe nke abụọ abụrụlarị akụkụ nke kachasị, ebe anyị na-ahụ ụlọ ihi ụra ebe ahụ.
Anyị nwere ike ịgwa ya na o nwere ọnụ ụlọ etiti nke kachasị mkpa maka onye nwe ya. Ebe ọ bụ na ọ hụrụ egwu n'anya nke ukwuu ma chọọ akụkụ ahụ n'ụlọ nzukọ egwu ya. Iji mezuo ịma mma nke ebe ahụ, ime ụlọ a gwụchara na mma dome. Ebe a na-eje ozi dị na ala nke atọ yana ime ụlọ ebe a na-asa akwa. N’agaghị echefu elu ụlọ ma ọ bụ teres. O doro anya na ọ bụ ihe ọzọ nke ezigbo akụkụ ileta. N'ihi na n'ime ya enwere ihe karịrị 400 mita nke ihe ruru 20 anwụrụ ọkụ mbụ kpuchie. A na-ekpuchi ha niile site na seramiiki nke agba dị iche iche. Gịnị na-eme ha anya!
Na facade nke Güell Obí
Ọ bụrụ na nleta gị n'ime na-adọrọ mmasị, naanị ịhụ ihu ya dịkwa mma ikwu. Ejiri ya wuo akụkụ a dum nkume e wetara na Garraf. Ebe ọ bụ na Güell nwekwara ụfọdụ ala ebe ahụ. Ọ bụrụ na anyị elee ya anya, façade ahụ nwere ihe dịka ọkwa atọ ebe nke mbụ n'ime ha bụ mpaghara dị ala na mezzanine. N'ime ya ị nwere ike ịhụ etu e si mee ka okwute chachaa kpamkpam anyị wee hụ ọnụ ụzọ ya na arches ha. Ejiri ogwe ígwè chebe uru ndị ahụ mana ha na-etolite aka pụrụ iche na ọbụlagodi nke ọma. Ugbua na ọkwa nke abụọ anyị nwere ike ịhụ nhazi ahụ nke na-apụta ma ọ bụ cantilever n'otu ụzọ ahụ dị na akụkụ mbụ yana jiri nkume ahụ na-egbu maramara. Mgbe obere dị elu, a na-arụ nkume ahụ ọkpọ. Uru ndị ahụ na-aga n'ihu na-achọ akụkụ a niile mma iji nye ya ndụ. Anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị na uwe nke ogwe aka nke Catalonia, Áve Fénix na mkpirisi 'E' na 'G' na-asọpụrụ onye nwe ya.
Mgbe ị gara Obí na price
Site na Tuesday ruo Sunday, ị ga-enwe ọbịbịa nke tolọ Güell. Cheta na Sọnde mbụ nke ọnwa ọ bụla ị nwere ike ịbanye n'efu, ma e nwere obere tiketi. A na-ekewa ha ụzọ abụọ, otu n’ime ụtụtụ n’elekere 10:00 na nke ọzọ n’ehihie, ndị a ga-ekesa tiketi ha na 13:30.
Oge ezumike dị site na 10: 00 ruo 20: 00 site na Eprel 1 ruo October 31.
Mgbe oge udu mmiri si na 10: 00 rue 17: 30 site na November 1 rue March 31.
Tiketi nwere ego nke euro 12. Ma, ọ bụ eziokwu na ha nwere a belata ọnụego ka 9 euro maka ezinụlọ buru ibu, karịa 65s ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ha na-adụ gị ọdụ mgbe niile ka ị kpọtụrụ ya ma na weebụsaịtị ya na n'ebe ọrụ igbe ọrịre.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ülọ Güell